Monthly Bonus For July 2020 ? Silver ? Beaute Cafe အထုပ် 500 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Myo Nander Aye (FB-000478) Beaute Cafe အထုပ် 400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Thaint (FB-000149) Myo Thandar Aung (FB-000047) Thet Su Kyi (FB-000012) Nandar Lin (FB-000683) Zin Zin Yu (FB-000530) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Silver Agent တို့ July လအတွင်း Beaute Cafe အထုပ် 500 ကျော် နှင့် 400 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Silver Agent အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus Beaute Cafe အထုပ် 500 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (4) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ Beaute Cafe အထုပ် 400 ကျော်အတွက် ?ငွေသား (3) သိန်း (2) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 600 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Su Mon Mon Zaw (FB000007) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Su Mon Mon Zaw !!! June လအတွင်း Nano ဘူး 600 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (4)သိန်း (8)သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို Nano ဘူး 500 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Tin Moe Thu (FB000101) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Tin Moe Thu !!! June လအတွင်း ဘူး 500 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ???ငွေသား (၄)သိန်း(၂) သောင်းကျပ်တိတိပါ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။